कोरियाको कमाईले ५५ जनालाई रोजगारी दिएका यूवा भन्छन ; कोरियाको कष्टले धेरैकुरा सिकायो ! – Korea Pati
July 31, 2019 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on कोरियाको कमाईले ५५ जनालाई रोजगारी दिएका यूवा भन्छन ; कोरियाको कष्टले धेरैकुरा सिकायो !
धर्मको नाममा हिंसा गरेको भन्दै दक्षिण कोरियाली नेतृलाई ६ वर्ष जेल
August 2, 2019 गुरुदत्त न्यौपाने